အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
(အစိုးရအဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခု၊ နယ်မြေတစ်ခု စသည်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အမြင့်ဆုံး သို့မဟုတ် ဒုတိယအမြင့်ဆုံး ခေါင်းဆောင်ကို ယေဘူယျခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲသည် များသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် မတူဘဲ တာဝန်ဝတ္တရား၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အာဏာများ ကွာခြားလေ့ရှိသည်။သမ္မတ၊ အဓိပတိ၊ ဝန်ကြီးချုပ် စသော အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်သည် နိုင်ငံအလိုက်ကွဲပြားမှုရှိသည်။အချို့သောနိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှင့် အစိုးရအကြီးအကဲသည် တစ်ဦးတည်းဖြစ်ကာ အချို့နိုင်ငံများတွင် သပ်သပ်စီဖြစ်သည်။
စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်အပါအဝင် ပါလီမန်စနစ်များတွင် အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲသည် ရာထူးလက်ရှိ အမှန်တကယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်သည်။သမ္မတစနစ်နှင့် ဘုရင်စနစ်များကို ကျင့်သုံးသည့်နိုင်ငံများတွင် အကြီးအကဲမှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်သည်။
၃ နိုင်ငံတော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲအတွက် နိုင်ငံအများစု၏ အမည်နာမမှာ ဝန်ကြီးချုပ် (Prime Minister)ဖြစ်သည်။သို့သော် အချို့နိုင်ငံများတွင် Chancellor၊ Secretary of State စသည်ဖြင့် အသုံးပြုသည်။
Chief Minister (အချို့နိုင်ငံများ)
Chief Executive (အချို့နိုင်ငံများ)
First Minister (အချို့နိုင်ငံများ)
State Counsellor (မြန်မာ)
State President (တောင်အာဖရိက)
ဦးသိန်းစိန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ Secretary of State ဟီလာရီ ကလင်တန်
မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဂျာမနီအဓိပတိ အင်ဂျလာ မာကယ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်က သမ္မတမှာ နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကာ ဝန်ကြီးချုပ်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှာ အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်၂၀၁၆ ဦးထင်ကျော်အစိုးရလက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတမှာ အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်အမည်ခံကာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ကြသည်။
အချို့နိုင်ငံများတွင် နိုင်ငံတော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မှာ အတူတူဖြစ်သည်။
တစ်ချို့ဘုရင်နိုင်ငံများတွင် ဘုရင်သည် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဘရူနိုင်းဆူလ်တန်၊ ဆော်ဒီဘုရင်တို့ ဖြစ်သည်။
↑ HEADS OF STATE, HEADS OF GOVERNMENT, MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS Archived 27 September 2012 at the Wayback Machine., Protocol and Liaison Service, United Nations (19 October 2012). Retrieved 29 July 2013.
↑ Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, International Law Commission, United Nations. Retrieved 29 July 2013.
↑ Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973, International Law Commission, United Nations. Retrieved 29 July 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲ&oldid=696667" မှ ရယူရန်
၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။